China, Kurume 26, 2009 China, Gumiguru 23, 2014 Douglas Karr
Ichi chipfupi uye chinotapira posvo pane caching nyaya. Masayiti nemabhurawuza zvakavakirwa kunyatsogadzirisa zviwanikwa. Vanozviita zvakanaka dzimwe nguva zvekuti mhedzisiro yacho inoputsa yako webhusaiti ine simba pane kuivandudza kazhinji sezvaunoda. Nhasi ndanga ndichishanda na JW Player, Flash Movie player inodhonza mune runyorwa rwemavhidhiyo kuburikidza neXML faira.
Dambudziko nderekuti isu tinogara tichigadzirisa iyo faira nema webinars matsva uye makirasi ekudzidzisa. Kana vatengi vedu vakaramba vachiuya kune iyo peji zuva rega rega, yaizotakura yakachengetwa vhezheni ye playlist uye isingambovaratidze zvazvino uye zvakanyanya.
Nekuda kweizvozvo, ini ndaifanira kubira iyo SWF Chinhu kodhi zvekuti yaizofunga kuti yairodha nyowani runyorwa nguva dzese.
Izvi hazvisi zvekubatsira chete paJW Player, ini ndashandisa zvakare nzira iyi kuGoogle Mepu kana ndichinge ndaita neKML mafaera anochinja zvine simba. Ingo gadzira isingabvunzi querystring uye iyo sisitimu inoteedzazve iyo (zvakaenzana static) KML faira nguva yega yega mushandisi paanoshanya. Iko kubira, asi iri nyore nzira yekushandura caching kure mune aya maficha asina sarudzo.
Vakaipa Vanonyepa kuti Social Media Gurus Weave
Kunaka kubira 🙂